प्रकाशित मिति : 24 February, 2020
फागुन १२ ।
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण दक्षिण कोरिया र जापानमा रहेका नेपालीहरु त्रासमा बसिरहेका छन् । चीनको हुबेई प्रान्तको वुहान सहरबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रकोप कोरिया र जापानमा समेत महामारीका रुप लिन थालेपछि त्यहाँ रहेका नेपाली त्रासमा बसिरहेका हुन् ।
पछिल्लो तथ्याकंअनुसार कोरियामा ६ सय २ जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् भने यसको संक्रमणबाट पाँच जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यस्तै, नेपालीको बाक्लो बसोबास रहेको जापानमा पनि १ सय ३५ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो ।
कोरियामा रहेका नेपालीले आफूहरु सुरक्षित तवरले बसिरहेको राजधानीसँग बताए । कोरियाका अधिकांश मुख्य सहरमा नेपाली कामदार र विद्यार्थी बस्दै आएका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन् ।
चन्द्रकोट गाउँपालिकामा माओवादी नेता केसी भारी मत सहित विजयी
केसीले ५ हजार ७०० मत ल्याएका हुन् ।
मालिका गाउँपालिका ८ मा ३० वर्ष पछि एमालेको विरासत ढल्यो !
मालिका गाउँपालिका ८ मर्भुङ्गमा नेकपा एमालेले २०४९ साल देखि निरन्तर रुपमा चुनाव जित्दै आएको थियो
गोकर्ण विष्टको, गृह पालिका इस्मामा गठबन्धनको वर्चस्व
त्यस्तै यता वडा नम्बर छ अमरपुरमा पनि गठबन्धनले ३० वर्ष पछि एमालेलाई पराजित गर्न सफल
मदाने गाउँपालिका १ अग्लुङबाट काँग्रेसका युवा नेता चन्द निर्वाचित !
चन्दले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका उम्मेदवार प्रेम चन्दलाई १७६ मतान्तरले पराजित गरेका हुन ।